Cách trồng & chăm sóc Lan phi điệp trong chậu cho người mới | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cách trồng & chăm sóc Lan phi điệp trong chậu cho người mới | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cách trồng & chăm sóc Lan phi điệp trong chậu cho người mới | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Nangona kulula ukukhula, kunzima kwabaqalayo ukuthenga izithole kunye nendawo yokukhula. Ngaphezu koko, ukuba awuzibambi iindlela ezisisiseko xa ukukhulisa ii-philips orchidsngoko ke kukho imiqobo kwinkqubo yokunyamekela.
Kule nqaku, ndiya kukukhokela inyathelo-nge-nyathelo ngokweenkcukacha ekuthengeni izithombo, ukulungiselela imidiya, ukutyala kunye nokunyamekela. Eli nqaku libhekiselwa kwisitishi seYouTube sikaLan Rung Cuong Hien. Kufuneka nje uyifunde yonke ngexesha elinye kwaye uya kuba nembiza yeorchid egqibeleleyo, kuphephe ukufumana ulwazi oluninzi oluya kukubhida.
1 Iimpawu zokukhula kwe-phalaenopsis orchid
2 Ixesha lokutyala iiorchids
3 Yintoni omele uyilungiselele ukutyala iiorchids?
3.1 1. Izithole
3.2 2. Iimbiza zokutyala
3.3 3. Phakathi
3.4 4. Isichumisi
4 Indlela yokukhulisa i-orchids kwiimbiza
5 Indlela yokunyamekela ii-orchids ezikhule kwiimbiza
5.1 1. Indlela yokunkcenkceshela
5.2 2. Ukukhanya
5.3 3. Ubushushu
5.4 4. Ukufuma
5.5 5. Ukungenisa umoya
5.6 6. Ukuchumisa
5.7 7. Uthintelo
Iimpawu zokukhula kwe-phalaenopsis orchid
I-Phalaenopsis orchid inezinga lokukhula eliphakathi, isityalo esithandayo ukukhanya, sikhula kakuhle kumaqondo okushisa ukusuka kwi-23 ukuya kwi-28 degrees.
Iintyatyambo zidla ngokudubula ekupheleni kwentlakohlaza okanye ekuqaleni kwehlobo (Aprili ukuya kuJuni).
Ngaphambi kokudubula kweentyantyambo, iziqu ezindala zihlala zoma, ngokuthe ngcembe zijika zibe tyheli okanye zibemfusa, emva koko amagqabi aqala ukuwa ngokuthe ngcembe.
Ubomi obude be-orchid buphezulu kakhulu, umthi usenokudubula iminyaka eyi-15.
Ixesha lokutyala iiorchids
Elona xesha lilungileyo lokutyala i-phalaenopsis orchids lixesha le-pseudobulbs, oko kukuthi, ukusuka kwixesha apho i-pseudobulbs ikhutshiwe ngokupheleleyo de ibe sele iza kuhluma kwisiseko.
Ngokomzekelo, ukuba iintyatyambo ziyaqhakaza entwasahlobo, kufuneka zityalwe ukususela ngoNovemba kwikhalenda yenyanga ukuya kuFebruwari wekhalenda yenyanga yonyaka ozayo; Ukuba iintyatyambo ziyatyatyamba ehlotyeni, zifanele zityalwe okanye zimiliselwe ekupheleni kwentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo yaye kwiintyatyambo ezintle, kusaxhomekeke kwindlela umntu ngamnye ayikhulisa ngayo iorchid.
Ngokuqhelekileyo, abantu abaninzi batyala iiorchids ekupheleni konyaka kwaye ukukhulisa iiorchids ezimbizeni kuthandwa kakhulu kuba kuya kuphucula ubuhle beorchids.
Nangona kunjalo, sinokutyala kulo naliphi na ixesha lonyaka, kodwa ukuba lityalwe ngexesha elingalunganga, umthi uya kuba phantsi okanye ukuwa.
Ngokomzekelo, ukuba iingcambu ze-pseudobulb zihluma zikhula kakuhle kakhulu, ukukrazula umva, ukutshala ngokutsha okanye ukutshala kwakhona kuya kulimaza iingcambu, okukhokelela ekubeni i-orchid ilahlekelwe amandla okanye ingakhuli ixesha elide.
Yintoni omele uyilungiselele ukutyala iiorchids?
Ukulungiselela lelona nyathelo libalulekileyo ekumiseleni ukutyala ngempumelelo, kwaye abantu abaninzi babhidekile kweli nyathelo kuba mininzi imiyalelo enokudida.
Kumava am, kuba ixabiso lokuqala aliphezulu, kufuneka ulandele isikhokelo esithile kwi-intanethi. Akukho mfuneko yokuba ufumane ulwazi oluninzi. Kamva, uya kuba namava ngokwakho, okanye kwinkqubo yokunyamekela nabuphi na ubunzima, uya kufumana indlela yokuyicombulula.
Ke kufuneka ulungiselele ntoni xa utyala iiphilippines?
Izithole ze-phalaenopsis orchid zihlala zineentlobo ezi-4 eziphambili:
Izigaqa zeOrchid ezixhatshazwayo ehlathini ziye zasikwa iingcambu, nto leyo efuna iindlela zokutyala kakhulu.
Imbiza ye-orchid ngaphandle kwevenkile inkulu, vele uthenge kwaye unakekele.
Iqhekeza lesiqu liyacelwa ukuba lisikwe kumthi ongumama, kufuneka liphathwe nguwe, iingcambu ezivuselelwe kunye nezihluma.
I-Kie orchid iye yahluma kwaye iingcambu ngokupheleleyo, emva kokuyithenga, yityale nje embizeni.
Apha, ndiza kukukhokela ukukhulisa uhlobo lwesi-4, kuba olu lolona hlobo luxhaphakileyo, olukwalula ukufumana nokuthenga, kwaye ukhethe umthi omkhudlwana ukwenza kube lula ukukukhokela ekukhuleni. Unokuthenga i-kies kwiigadi ze-orchid, iivenkile ze-bonsai okanye kwi-intanethi.
2. Iimbiza zokutyala
Ngenxa yokutyala ixesha elilodwa kwaye akusayi kuphinda kufakwe i-repotting, kungcono ukhethe imbiza yokhuni, kuba iyona nto ihleli kwaye iyathandeka. Kakade ke, ukuba iimeko azivumeli, ungasebenzisa iimbiza zeplastiki.
Ixolo lepine elinobukhulu obahlukeneyo, ubulembu kunye nesiponji. Zonke zifanele ukuba zazisingathwe ngenyameko.
Lungiselela isichumiso esicothayo (umgquba omhlophe waseTaiwan) kunye nesichumiso esikrelekrele njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Indlela yokukhulisa i-orchids kwiimbiza
Inyathelo loku-1: Kwiimbiza zokhuni, kuyimfuneko ukugubungela ngaphakathi kunye noluhlu lwe-mesh ukukhusela i-substrate ekubalekeni. Emva koko umgca phantsi kunye noluhlu lwe-foam.
Injongo ye-foam ye-foam kukunciphisa inani le-pine bark ebhodweni, ukudala umoya wokuphefumula kunye nokungagxili kwamanzi.
Inyathelo lesi-2: Beka umaleko we pine bark embizeni.
Inyathelo lesi-3: Nika iimbewu ezingama-20-30 zesichumiso esicothayo, ubulembu obuthile kunye nembewu yesichumiso esikrelekrele njengoko kubonisiwe kwifoto.
I-Moss kukugcina i-substrate ifumile, ukuba i-medium yomile, i-orchid iya kukhula kakubi. Kwaye isizathu sokuchumisa kukuba kamva iingcambu ze-orchid ziya kudla phantsi, ukuba akukho mgquba uya kudla phezu komhlaba.
Inyathelo lesi-4: Beka ixolo elikhulu lepine phezu komhlaba.
Inyathelo lesi-5: Ngoku, sebenzisa iintsimbi ezi-2 ze-zinc (i-aluminiyam, ii-hanger zempahla), okanye iintsimbi zentsimbi ezigqunywe ngeplastiki ezithengiswa evenkileni ukuze zibophe phezulu embizeni. Ibar emise okwe-L, ibha ethe tyaba, imivalo emi-2 enqumla kumbindi we-pelvis njengoko kuboniswe ngezantsi.
Inyathelo lesi-6: Qhubeka ngokutyala iiorchids ezidadayo kumphezulu wembiza.
Sebenzisa ucingo ukulungisa umzimba we-orchid ngentsimbi yentsimbi.
Qaphela: Kuphephe ukubophelela intambo kumehlo aleleyo kwisiseko, njengoko oku kunokuwathintela ekukhuleni.
Inyathelo lesi-7: Beka ixolo lompayini elincinane phezu kweengcambu zeorchid, ukunqanda iingcambu ekubeni zome.
Qaphela: Iorchid kufuneka ishiywe ivulekile, ukuba igqunyiwe iya kubangela ukuba ibole.
Inyathelo lesi-8: Ekugqibeleni, yongeza umaleko we-moss phezulu, ukwenzela ukuba xa unkcenkceshela ifakwe emanzini, igcine ifumile kwaye iyancipha ngokuthe ngcembe. Kuba ukukhula kwiimbiza kunomoya kakhulu, yoma ngokukhawuleza.
Qaphela: I-Moss kufuneka ifakwe kwaye ibiliswe (iphathwe) ngaphambi kokusetyenziswa, kule moss inokuthi iqulethe ezininzi iinkumba, ukuba zikhona, ziya kuhlasela amahlumela amancinci e-orchid.
Emva kokutyala iintsuku ezi-3-5 zinokunkcenkceshelwa, kodwa ngokukhawuleza okanye emva kwexesha lokunkcenkceshela, kufuneka uqaphele ukuba imeko ye-substrate yomile okanye imanzi.
Indlela yokunyamekela ii-orchids ezikhule kwiimbiza
Indlela yokunyamekela i-phalaenopsis orchids ngokulula, emva kokufaka ii-orchids ungazixhoma kwaye uzinike ukukhanya kwelanga malunga nama-40 ukuya kuma-50%.
Kananjalo awudingi ukunkcenkceshela, kuba ukuphepha ukulimala komatshini ngexesha lokufakwa kwe-orchid. Kufuneka sinikele ingqalelo ekhethekileyo kwimozulu, ngoko ke unqande imvula xa uxhunyelelwa iiorchids, imvula enkulu ngokupheleleyo.
1. Indlela yokunkcenkceshela
Kwimozulu yasehlotyeni, iiorchids ziyachuma, ngoko ukunyamekela iiorchids kweli nqanaba lilula kakhulu, kufuneka unkcenkceshele amaxesha ama-2 ukuya kuma-4 / ngeveki.
Ekwindla, ukuba ubona ukukhula okucothayo, amanzi amancinci, ukunciphisa ukunkcenkceshela ukuya kwi-1 ukuya kumaxesha ama-2 ngeveki ukuze izityalo zingabi namanzi kwaye zibune.
Ixesha Phalaenopsis orchids Ukulungiselela iintyatyambo kusebusika, kufuneka uyeke ukunkcenkceshela ngeli xesha. Ukuba ukufuma kuphantsi kakhulu, inkungu kufuneka itshizwe kanye okanye kabini ngenyanga.
Nangona ii-orchids zidinga ukukhanya okukhulu kwaye ziphantse zishiywe ngaphandle, ukunqanda ukutshiswa lilanga kwamagqabi amancinci, kufuneka ulungiselele umnatha.
Ukungabikho kokukhanya kwelanga kuya kwenza kube nzima kakhulu ukuba iimbiza ze-orchid zidubule. Xa ubona umthi ugubha, luphawu lokuba imbiza yakho ye-orchid iswele ukukhanya kwelanga, ngokukhawuleza uthathe isityalo kwindawo ekhanyayo ukuze i-orchid iqhubeke ikhula.
I-Phalaenopsis orchids kufuneka igcinwe kwiqondo lobushushu elingama-40 ukuya kuma-80°F okanye ama-8 ukuya kuma-25°C. Noko ke, zisenokuba shushu zibe yi-100°F okanye i-38°C yaye zibanda njenge-38°F okanye i-3.3°C.
Ngaphandle koko, kukwanzima ukuba i-Phalaenopsis orchids idubule ukuba ubusika abubanda ngaphantsi kwe-50°F okanye i-15.6°C kangangeeveki ezi-4 ukuya kwezi-6 ezilandelelanayo.
I-Phalaenopsis orchids ikhula ngamandla ukuba umswakama ufikelela kwi-60 ukuya kwi-70%, umswakama uphantsi kakhulu, izityalo ezincinci aziyi kukhula kwaye zibune.
5. Ukungenisa umoya
Umthi nawo awukhuli ngamandla ukuba awungeni moya kwaye ngexesha lokusasazeka kwe-bud, ukuba akukho moya, i-buds iya kuba ngaphantsi, ngoko kufuneka sinikele ingqalelo kwindlela yokukhulisa i-orchid ukuze isityalo sikhule kakuhle. indlela.
Phawula: Kukho imigaqo emithathu ekufuneka ilandelwe: umoya ongenamoya; linelanga kodwa alilanga; amanzi angenamanzi? Ngamafutshane, kufuneka ugcine imozulu yegadi ilungelelene kwaye isondele kwimozulu yendawo yemvelaphi ye-orchid.
Indlela yokuchumisa iorchid ikwalula kakhulu, kusetyenziswa izichumisi eziphilayo okanye ezingaphiliyo. Nangona kunjalo, azithandi izichumisi ezinokuphazamiseka kwenitrogen.
Kufuneka uchume ngesichumisi 15-15-15 kude kube ngoSeptemba, ukususela ngoSeptemba ukuya kuNovemba, sebenzisa i-10-30-10. Ukususela ngoDisemba ukuya ekupheleni kukaJanuwari wonyaka ozayo, yeka ukuchumisa ngokupheleleyo.
Ukuba uqhubeleka nokuchumisa okanye ukuchumisa ngenitrogen eninzi, isityalo siya kuvelisa izithole (keiki) endaweni yamathupha.
Indlela yokuthintela ukugula Phalaenopsis orchids kukutshiza igumbi ngamanzi acocekileyo ekalika. Igaqa elilingana nobhontsi lifakwa kwiilitha ezi-1.5 zamanzi kwaye emva koko ulinde amanzi acwengileyo ukuba atshize kwi-substrate.
Ukutshizwa kabini ngenyanga, kunokutshizwa ukunqanda izifo ngeStarner (ekhethekileyo kumzimba), ngexabiso eliphantsi kunegolide yeRidomil (50k/pack).
Ukutshiza ngamanzi acocekileyo ekalika kwenza isityalo somelele kwaye singaboli kuba ikalika inecalcium eninzi (Ca). Kwangaxeshanye, isakhono se-bactericidal sekalika sihle kakhulu, igolide ye-Ridolmild inqanda ukungunda, i-Starner igxile kwi-bactericidal kodwa ayinabungozi emzimbeni.
Ukusebenza ukunyamekela iiorchids Ukufumana iziphumo ezihle, kufuneka sitshize rhoqo amayeza okubulala izitshabalalisi ukunqanda iintsholongwane ezibangela izifo ukuba zingaphindaphindeki kwaye zibe yingozi kwiiorchids. Ngaphandle koko, unokuphinda unyibilikise i-slaked lime emanzini, utshize kwi-substrate ye-orchid.
Nangona kunjalo, emva kweeyure ezi-2, kuyimfuneko ukutshiza kabini ngamanzi acocekileyo ukuze izityalo zingatshisi kwaye zitshise amaqabunga kwaye ngezikhathi ezithile kwiinyanga ezi-2.
Phawula: Emva kweeyure ezi-2, phinda utshize ngamanzi amhlophe.
Nanga amanyathelo okwenza a ii-orchids ezigayiweyo ube neentyatyambo ezintle. Siyabona Indlela yokukhulisa nokunyamekela i-phalaenopsis orchids Akunzima njengoko abantu abaninzi becinga.
Ngeli nqaku, ndiyathemba ukuba uya kuzazi iinkqubo kunye namanqanaba okukhula ngokwakho ii-orchids ezigayiweyo wanelisekile ngokwenene. Umnqweno omhle!
Umthombo: Eli nqaku libhekiselwa kwitshaneli ye-YouTube Cuong Hien Lan Rungabafundi banokutyelela eli jelo ukuze babukele izifundo zevidiyo ngeeorchids.
Những Điểm Đặc Biệt Của Hoa Lan Sóc Ta Và Cách Trồng | Hatgiongtihon.net
Cách trồng lan Mokara “siêu đơn giản” cho người mới chơi | Hatgiongtihon.net